'दर्पण छायाँ २' को क्लाईमेक्स फेरि किन खिचियो ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
‘दर्पण छायाँ २’ को क्लाईमेक्स फेरि किन खिचियो ?
२४ पुष,२०७३ | Forseenetwork
सिनेमा ‘दर्पण छायाँ २’ को क्लाईमेक्स फेरि खिचिएको छ । जय गिरीले सिनेमामा क्लाईमेक्सको १५ मिनेटको दृश्यलाई भीएफएक्सबाटै आकर्षक बनाउने जिम्मा लिएका थिए । तर भीएफएक्सबाट सोचेजस्तो क्लाईमेक्स नभएपछि निर्देशक तुलसी घिमिरले क्लाईमेक्स फेरि खिच्ने योजना बनाएका थिए । दार्जिलिङको सभा हलमा क्लाइमेक्स फेरि खिचिएको छ । क्लाईमेक्स खिचिसकेपछि निर्देशक तुलसी घिमिरे सोचेजस्तो काम भएको भन्दै निकै खुसी भएका छन् ।
सिनेमामा पुष्पल खड्का, सहारा कार्की, श्रद्धा प्रसाई, फिरोज तिमिल्सेना, सुमन घिमिरे, जीवन आचार्य लगायतको मुख्य भूमिका छ ।
यो फिल्मका निर्माता साबु गदाल कार्की र रवि कार्की हुन् । सिनेमाको क्लाईमेक्समा भएको नृत्यलाई मिङमा दोर्जी लेप्चाले कोरियोग्राफ गरेका छन् ।